We Fight We Win. -- " More than Media ": စိန်သံလုံး စိတ်ထိခိုက်ခြင်း
(၁)။ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကို ဆက်လုပ်သင့်ပါသည်ဟု ဒေသခံ ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး ဦးပိုင်ကုမ္မဏီနှင့် တရုတ်ဝမ်ပေါင်ကုမ္မဏီအကြိုက် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်မှုတခု ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆောင်ရွက်ပြခဲ့ပါသည်။
ထို့အတွက် --- လွန်စွာ စိတ်ထိခိုက်ရပါသည်။
(၂)။ ထိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်က လပေါင်းများစွာ အချိန်ကြာကြာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သော်လည်း ထွက်ရှိမည့် အဖြေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အများပြည်သူအကြိုက် ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မည်ဟူ၍ ကြိုတင်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ယခုလည်း စစ်တပ်ဦးပိုင်အကြိုက်၊ တရုတ်ဝမ်ပေါင်အကြိုက် ဘက်လိုက်ခဲ့သည်ဟု အများပြည်သူက ဝေဖန်ပြောဆိုနေပါသည်၊ မျှတမှုမရှိဟု ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဆန္ဒပြခြင်း၊ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းများ၊ အားမလို အားမရ ဖြစ်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။
(၃)။ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကိစ္စ ဆန္ဒပြ သံယာတော်များကို ၂၉. ၁၁. ၂၀၀၂ က ဖြိုခွင်းခဲ့စဉ်က မီးလောင်ဒဏ်ရာရ သံယာတော်များ ခုချိန်ထိ ဆေးရုံမှ မဆင်းရသေး၊ ဆင်းခဲ့သူများသည် စိတ်မချရသေး၊ ခန္ခာကိုယ်တွင် အဆိပ်များ ပျံနှံ့နေမှုများ ကုသနေရသေးသည့် အခြေအနေများမှာ ငြင်းကွယ်၍ မရပေ။ လက်ရှိ ထင်ထင်ရှားရှား ကုသနေရဆဲ ဖြစ်ပါသည်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်တွင် ဆေးကုသနေသော ဦးဇင်းကြီး ဦးတိက္ခဥာဏမှာလည်း ထိုင်းဘတ်ငွေများ သန်းချီ ကုန်နေသော်လည်း အရှင်းပျောက်ကင်းမှု မရှိကြောင်း သိရပါသည်။
(၄)။ ဒဏ်ရာရ သံဃာတော်များမှာ မီးလောင်ဒဏ်ရာများနှင့် သက်သေခံနိုင်သော်လည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်က မီးခိုးဗုံးဟု တွင်တွင်သုံးနေသည်။ အကြမ်းဖြိုခွင်းမှုအတွက် တာဝန်ယူရန် တိုက်တွန်းထားခြင်း မရှိသည့်အပြင် ဒဏ်ရာရ သံဃာတော်များ လူဖြစ်ရှုံးရသည့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုကို မျက်ကွယ်ပြုထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်သည် ဖွဲ့စည်းပေးသည့် အစိုးရအကြိုက်သာ ဆောင်ရွက်သည်ဟု ပြည်သူအများက ယူဆနေကြပါသည်။
(၅)။ မီးလောင်ဒဏ်ရာရ သံဃာတော်များ၏ ဒဏ်ရာများက မီးခိုးဗုံးမဟုတ် မီးလောင်ဗုံး ဖြစ်သည် ဆိုသည်မှာ ငြင်းလို့ရမည် မဟုတ်ပေ၊ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်မှ ဥက္ကဌနှင့် တာဝန်ရှိသူများ ကိုယ်တိုင် မခံရသေး၍ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိသူများဟု သတ်မှတ်ရပါတော့မည် (အကြံပြုလိုသည်မှာ ကိုယ်တိုင် အပစ်ခံကြည့်ပါ)။ ထိုအခါ မီးခိုးဗုံးပါဟု ပြောတော့မည်မဟုတ်ပါ၊ အမှန်တရား ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုသူများ အရှက်တရား ထားစေလိုပါသည်။
(၆)။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လူထုခေါင်းဆောင် ဒီမိုကရေစီ မိခင်ကြီးဟု ထင်မှတ်ယုံကြည်ခဲ့သူများ ရှိပါသည်၊ လက်ပံတောင်းကိစ္စ ကိုင်တွယ်ပြလိုက်သောအခါ ယုံကြည်မှုများ၊ အားကိုးမှုများ အထင်ကြီးမှုများမှာ သဲထဲရေသွန်မိသလို ဖြစ်သွားပါသည်ဟု ပြောဆိုဝေဖန်နေကြပါသည်။ အလွန်နှမြောရသည်မှာ ဘမျိုးဘိုးတူ အဖေတူသမီးဟု တင်စားခွင့် ဆိတ်သုဉ်းသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(၇)။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လိုက်နာပါမည်ဟု အစီရင်ခံစာ မထွက်ခင် အတော်စောစောပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်က ကြိုတင်ပြောကြားခဲ့ပါသည်၊ ယခုလို အဖြေမျိုး ထွက်မည်ဟု ကြိုတင်သိ၍ ပြောခဲ့ခြင်းဟု ထိုစဉ်က သံသယဖြစ်ခဲ့မိပါသည်၊ ထင်ခဲ့သည့်အတိုင်း သံသယရှိခဲ့သည့်အတိုင်း ဖြစ်လာသောအခါ တိုက်ဆိုင်မှုပါဟု ပြော၍မရတော့ပါ။
တရုတ်သံအမတ်ကြီး တာဝန်မလွဲပြောင်းမီ မတ်လ ၅ ရက်နေ့က ဒေါ်စုကို နေပြည်တော်သို့ လာရောက်တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်၊ ယခင်က ယခုလို လူရာမသွင်းခဲ့သော တရုတ်အကြံအစည်နှင့် လုပ်ရပ်များက ထူးဆန်းနေပါသည်၊ ယခုမှ သဘောပေါက်ရပါတော့သည်၊ ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းကလည်း တရုတ်ကို ကြောက်ရပါသည်ဟု လက်ပံတောင်းတွင် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ ယခုမှ မှန်ကန်ကြောင်း ဆင်ခြင်မိပါတော့သည်၊ အဆီကို စား အသားကို မျိုနေသော တရုတ်၏ လုပ်ရပ်များသည် ကြာလေလေ ခိုင်မြဲလေလေ သီချင်းကို ဆိုရပါတော့မည်၊ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် တရုတ်၏ လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုကို လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့ သိသိသာသာရော မသိမသာရော လက်ခံနေကြောင်း ထင်ရှားပေါ်လွင်နေသည်ဟု ပြည်သူအများက ယုံကြည်နေကြပါသည်။
(၈)။ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေးသည် ဒေသခံပြည်သူများ၏ လိုလားချက် ဆန္ဒတခုဖြစ်သည်၊ ရေရှည်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကျိုးထိခိုက်မှုများ ရှိနေသဖြင့် ဒေသခံများက ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေခြင်းဖြစ်သည်ကို ကမ္ဘာက သိနေကြသည်၊ မြန်မာက လူတစုက မသိချင်ယောင်ဆောင်၍ ဦးပိုင်နှင့် ၀မ်ပေါင်အကျိုးကို မလွန်ဆန်နိုင်သော ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆန့်ကျင်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေး မလေးစားမှု၊ ဆူပူမှုကို ပိုမိုကြီးထွားစေသော အစီရင်ခံစာကို တာဝန်ယူ ထုတ်ပြန်မှုကို မည်သို့ နားလည်ရမှန်းမသိအောင် အံ့သြမိပါသည်၊ ထို့ကြောင့် မကြာမီ လက်ပံတောင်းဒေသတွင် ရဲနှင့်ပြည်သူ ကြည်ဖြူရန် မရှိတော့ပါကြောင်း အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းမှုများ ပိုမိုအတင့်ရဲလာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဗေဒင်ဆရာများထံ သွားရောက်မေးမြန်းရန် မလိုတော့ပါ။
(၉)။ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆု အပါအ၀င် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်သော ဆုတံဆိပ်ပေါင်းများစွာ ရရှိနေသူက မြန်မာပြည်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ထိခိုက်ပျက်စီးစေမည့် လုပ်ရပ်များကို ဟန့်တားခြင်း၊ အမုန်းခံ ပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသည်ကို ထူးဆန်းစွာ မြင်တွေ့နေရပါသည်၊ ဥပမာ - ကချင်ကိစ္စ၊ ရခိုင်ကိစ္စ၊ ဘင်ဂါလီကိစ္စနှင့် လယ်သမားအရေး အလုပ်သမားအရေး မတရားအနိုင်ကျင့်ခံရမှုများတွင် ပါဝင်ရပ်တည် ပြောဆိုခြင်းမရှိသည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လူထုခေါင်းဆောင် မဟုတ်တော့ကြောင်း လူထုအားကိုးထိုက်သူ မဟုတ်တော့ကြောင်း လူထုအများက ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။
ထို့အတွက် --- ထို့အတွက် --- လွန်စွာ - လွန်စွာ - လွန်စွာ စိတ်ထိခိုက်ရပါသည်။
Blogger ng kyauk kyi.
We cannot establish time line.
Blogger, you like then you post. You don't like, delete. Is that how do we believe you support for Democracy? Be brave. I do believe you all are conservative. You all are selfish. You all are enemy of the states. You all doing own business based on political.
မိုးသီးဆိုတဲ့အကောင်က ပွဲလှန့်ရင်ဖျာခင်းမယ်။ ဒါဘဲနားလည်တဲ့ကောင်။ အခွင့်အရေးလေးရလိုရငြား ပြည်တော်ပြန်သွားတော့လည်း အနေအထိုင်မတတ်တော့ လူချဉ်ဖတ်ဖြစ်တာပဲ အဖတ်တင်။ ပြည်ပမှာရပ်တည်ဖို့ကလည်း ထောက်ပံ့ကြေးကရှားလာပြီလေ။ ခွေးသတောင်းစား ဖြုတ်ဦးနှောက်နဲ့သွားပြီး ဟောင်နေသေးတယ်။ ဟန်ဝင်းအောင်တို့လို့ လင်းဒတွေကို မြောက်ပေးနေတာမင်းတို့လို အဝေးက မြွေပွေးတွေ။ မင်းတို့လိုကောင်တွေ ငါတို့မြန်မာပြည်မှာ မွေးတာ တိုင်းပြည်သနတယ်ကွာ
A fool's comment!
why don't you die.
Ludu?? I am very sure very small amount of minority disagree with her but vest majority standing right behind her. I am agree to disagree so I am not going to say anything. Just read all the comments over the Facebook, news websites and social medias.. it is so clear.. good luck with your Ludu..
16 March 2013 at 04:28
sein thanlone is antiASSK
ပွဲလန့်တုံးဖျာခင်းချင်တာ မိုးသီးတင်မဟုတ်လောက်ဘူး။ မိုးသီးဘေးက အဆင့်မရှိ ကျက်သရေ မရှိကောင်တွေလဲ ပါလောက်တယ်။ စိန်သံလုံးဆိုတဲ့ကောင်လဲ လုပ်စားနိုင်ငံရေးသမား ပဲနဲ့တူတယ်။ စကောလောက်မှ ဇောက်မနက်တဲ့ ကောင်တွေ။ ခောတ်သစ် ဂလုန် ဦးစော နိုင်ငံရေးသမားတွေနေမှာပေါ့။